कसैले आफुलाई वास्ता गरेको छैन भने कुरा गरिरहन मुनासिव हुँदैन । उनले पनि मलाई कत्ती वास्ता गरिनन्। फोन नम्बर सम्म दिन अप्ठ्यारो मान्नेसँग कुरा गर्ने मन त हुँदैन । सधैं आफै कुरा गर्ने प्रायास गर्नुले एकतर्फी प्रयासको विफलता जनाउँछ । त्यसैले म लागिरहन मन हुँदैन । उनको भाग्यमा अरु नै कसैको स्थान लेखिएको हुनपर्छ भनेर मेसेज गरिन। उनीसँग नबोल्ने निश्चय दृढ भयो मेरो । दुई दिन बित्यो, उनको कुनै खबर आएन । समय मिलेन भनेर सोच्ने हो भने सानो मेसेज गर्न कति नै समय लाग्ने थियो र ! वास्तविकतामा भन्नुपर्दा म कुनै प्राथमिकतामा परिन ।
म पनि अब आफ्नो कामको सुरमा लागिसकेको थिएँ । मनमा विचार आयो । " कोही मान्छे किन हेर्दा मनले खान्छ तर व्यवहारमा मिल्दैन । व्यवहार कति राम्रो भएको मान्छे आकर्षक नहुने हुन सक्छ । मन नै वैरी हो । आकर्षण नभएसम्म मन पग्लिन्न । मनको आकर्षण हुन लामो समय साथमा संगत गर्नुपर्छ होला। त्यसपछि न कपाल न शरीर न अनुहार। वास्तवमा व्यवहारको मात्रै हिसाब हुन्छ । यो हिसाब गर्न दिमागले कहिल्यै नछोड्ने नै होला है । " तर यहाँ उनको मनलाई कसरी वैरी भन्नू । चित्त नबुझे बुझेन । आफूलाई वास्ता नगर्ने केटीलाई धेरै फकाउने प्रयास गर्नु खासमा बुद्धिमत्ता होइन। एक जना साथीले भनेको थियो " जीवनमा आफूलाई मन पर्ने साथी भएन भने आफूलाई मन पराउनेसँग जीवनको भविष्यको कल्पना गर्नु उत्तम हुन्छ। किनभने उसले आफूलाई कहिल्यै छोड्दैन । " हुन त यस्ता दर्शनका कुराले जीवन संतोषी बनाउने मात्रै त हो ।
मैले त उनीप्रति आफ्नो केही भावना राखेको थिएँ। त्यसलाई " Interest " अर्थात रुचि भन्छन् होला । मप्रती उनको रुचि नहुनाले मैले उनलाई सम्पर्क नगर्ने निश्चय गरेँ । मप्रती रुचि राख्ने कतै त हुनैपर्छ नि। कसैको जिवनमा धेरै ठोक्किन जानु Noise हो । म सधैँ music मात्रै हुने प्रयास गर्छु । कसैप्रति अनुराग हुनु नहुनु व्यक्तिगत कुरा हो । उनको अनुरागको पात्र अझै समयले जुराइसकेको छैन । पुनः समयलाई जिम्मामा छोड्छु । उनले सम्पर्क गर्न नखोज्नु मलाई " Noise" मानेकी हुनुपर्छ । यति विचार मन्थन गरेपछि मेरो मन हल्का भयो । फेरि चङ्गा भएँ । केही गुमेको महसुस भएन । "शिवोहम शिवोहम्"
भर्सेला परोस् । एकतर्फी अनुरागलाई सफल पार्ने प्रयास गर्दिन । उनले यत्तिकै पठाएको मेसेज हो । म पुनः आफ्नै मनको खेलमा पर्दिन भनेर दृढ भएँ । तर त्यन्द्रोजतिको खुशी नलागी पनि बस्न सकिन । उनको थोरै भएपनि भावना नमिसिएको मेसेज थियो । पठाइहालम् न भनेर पठाएको मेसेज थियो भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि मलाई किन अलि अलि खुसी लागेको ? मनको खेलमा म हारेँ । केही खुसी, केही शिष्टाचार, केही विस्वास आदि कुरालाई केलाउँदा शिष्टाचारलाई भएपनि धन्यवाद भनेर भन्ने निर्णय गरेँ । "Thank you".